Mareykanka oo duqeyn la beegsaday Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Mareykanka oo duqeyn la beegsaday Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Diyaarado dagaal ayaa waxaa la sheegay inay xalay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen degaan hoostaga degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, iyada oo lala beegsaday Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Saraakiil Ciidan ayaa waxaa ay sheegeen in duqeynta laga fuliyay Deegaanka Ma’moodow oo qiyaastii 40km u jira Degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, isla markaana lagu dilay saraakiil & xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha ma sheegin Magacyada saraakiisha Al-Shabaab ee duqeyntaas lagu dilay, hayeeshee waxaa ay sheegeen in howlgalkaas uu ahaa mid lagu wiiqayo awooda Al-shabaab oo weli ku sugan degaano ka tirsan gobolka Bakool.
Mareykanka ayaa inta badan fuliya duqeymaha dhanka cirka ah ee lala beegsada Al-Shabaab, waxana Mareykanka uu sheegaa in uu ku dilo Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab wallow mararka qaar ay ku waxyeeloobaan dad Shacab ah.
Degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool ayaa waxaa ay muddo dhowr sano ah u go’doonsan tahay Al-Shabaab, waxaana kajira dhibaatooyin kala duwan, iyada oo dowladda Soomaaliya & Maamulka Koonfur Galbeed ay wadaan qorsho go’doonka looga qaadayo degmadaas
Previous articleShirkii ay ku baaqeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo baaqday
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Sanaag oo ka badbaaday isku day dil